LGBT maAmerican: Yakasimba yekufamba inoda uye chaiyo mapurani ekufamba kunyangwe COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » LGBT maAmerican: Yakasimba yekufamba inoda uye chaiyo mapurani ekufamba kunyangwe COVID-19
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Kurwisa • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • LGBTQ • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
LGBT vekuAmerican vanotaura zvine simba zvekufamba zvinodiwa uye zvakatarwa zvirongwa kunyangwe COVID-19
Hazvishamise kucherechedza, vazhinji vevanhu vakuru vekuAmerica vakaongorora mwedzi uno neThe Harris Poll, vanoratidzira kusagadzikana uye kuita-kunonoka maitiro ekumutsiridza kwavo kuzorora uye bhizinesi maitiro. Kubvuma kunetsekana kwehutano hweveruzhinji pamwe nemipimo mitsva inokurudzira kufamba kwakachengeteka uye maitiro ekugara, kunyangwe vafambi vanogara vachiwanzo chenjerera pakuita zvirongwa zvavo zvinotevera maererano ne coronavirus dambudziko.
Munzira dzakawanda, ngochani, ngochani, bisexual uye transgender (LGBT) vakuru vanoita kunge vanoratidzira vamwe vavo vasiri-LGBT, asi vobva munzira dzakakosha kusanganisira yavo yakapfuura yekufamba. Vakuru veLGBT, semuenzaniso, vakataura vachitora avhareji enzira dzekuzorora 3.6 mugore rapfuura (zvichienzaniswa ne2.3 nzendo dzekuzorora dzevanhu vasiri-LGBT vakuru) pamwe ne2.1 nzendo dzebhizimusi, paavhareji, zvichienzaniswa ne1.2 nzendo nevanhu vasiri-LGBT vakuru.
Mimwe misiyano mikuru yakaonekwawo muchidzidzo chino:
Vakwegura veLGBT vane mukana wakapetwa kaviri wekuronga kufamba pamusoro peChirangaridzo Zuva rekupera kwevhiki nevasiri vakuru veLGBT (8% vs. 4%).
Vakabvunzwa pavanotarisira yavo inotevera yekuzorora rwendo, 28% yevakuru veGBBT vakapindura kuti zvaizoitika mumwedzi mina inotevera (Chivabvu-Nyamavhuvhu) kana zvichisiyaniswa ne21% yevakuru vasiri-LGBT. Ingopfuura hafu (51%) yevakuru veGBBT vs. 46% yevasiri-LGBT vakuru vanotarisira kuenda kuzororo mu2020.
46% yevakuru veGBBT (kana ichienzaniswa ne37% yevamwe vasiri-LGBT) vanotarisira kuti mamiriro enjodzi achagadziriswa mwaka uno wezhizha wekufamba mwaka wezhizha.
Iyi ndeimwe yemhedzisiro yeongororo yepamhepo yakaitwa neThe Harris Poll pakati pevanhu 2,508 18 vanomiririra nyika yose vakuru veUS vane makore 6+ pakati paMay 8 na2020, 284. XNUMX vakuru vakapindura vanozvizivisa sevabonde, ngochani, bisexual uye / kana transgender (LGBT ) inosanganisira yakanyanyisa sampuro.
"MaAmerican anowanzo kunzwa kufamba ndiko kurarama kwavo," akadaro Erica Parker, Managing Director weThe Harris Poll. "Bhenji yedu nyowani inoratidza kuti kupokana, kusava nechokwadi kana kuvhiringidzika vazhinji vedu tinonzwa tichienzanisa kudiwa kwedu kwekufamba nenjodzi dzehutano nekuchengetedzwa. Iri kunyanya kujekesa kusiyanisa kufanana uye misiyano pakati pedu, kusanganisira vafambi veLGBT. ”
Kunyangwe uchifamba kana kuti kwete munguva yepedyo-nguva, vakapindura veBGBT vakashuma kunzwa kusununguka kupfuura vamwe vari kuita sarudzo dzakasarudzika dzekufamba nhasi:
Kufamba kuenda kunzvimbo yekuUS: 64% LGBT vs. 58% vasiri-LGBT vakuru.
Kugara muhotera: 59% LGBT vs. 50% vasiri-LGBT vakuru.
Kugara paAirbnb: 43% LGBT vs. 35% vasiri-LGBT vakuru.
Kubhururuka ndege yekutengesa: 43% LGBT vs. 35% vasiri-LGBT vakuru.
Kuenda kuEurope: 35% LGBT vs. 28% vasiri-LGBT vakuru.
Kuenda kuchiitiko chakazara vanhu, konzati, theme paki kana kumahombekombe: 33% LGBT vs. 25% isiri-LGBT.
Kutora chikepe: 31% LGBT vs. 23% isiri-LGBT.
Chekupedzisira, pavakabvunzwa kuti ndeapi mamiriro kana nharo zvichave zvine simba zvakanyanya pazvisarudzo zvavo zvemunhu zvinoenderana nekufamba kwekuzorora mu2020, vafambi veLGBT vakafarira zvisingaenzaniswi vanoverengeka:
Zvakanyanya kudzikisira njodzi dzeveruzhinji: 60% LGBT vs. 54% isiri-LGBT.
Yakasimba kudiwa kwekufamba / shanduko yenzvimbo: 54% LGBT vs. 43% isiri-LGBT.
Kumanikidza mafambiro ekufamba uye kukwidziridzwa: 47% LGBT vs. 36% isiri-LGBT.
Chido chako pachedu chekutsigira kwekuenda uye hupfumi hwenzimbo: 48% LGBT vs. 33% isiri-LGBT
"Kutsvagurudza kwakapfuura kunotiudza kufamba kunoramba kuri kukoshesa kwevatengi veLGBT - kunyangwe kana vachikunda zvipingaidzo," akadaro Bob Witeck, Mutungamiri weWiteck Communications, nyanzvi yemusika weLBBT. “Izvi takazviona muna 2001 zvichitevera 9/11, pamwe nekudzikira kwehupfumi muna2009, apo vanhu vakuru veLGBT vakaratidza chishuwo chakasimba chekufamba zvekare. "Sezvo mamiriro ezvinhu achibvumidza, uye hupfumi hwachavhurika, tinofungidzira vafambi veLGBT zvakare vachawanikwa vakananga kumberi kwemitsara mizhinji panhandare dzendege, mumahotera nenzvimbo dzinodiwa."
"Isu tese tinoshanda muLGBTQ + kushanya takaona kushinga uye kuvimbika kwenzanga yedu yekufambisa, asi kuve ne data rekutsigira izvi zvakakosha kuti tione kuti vafambi veLGBTQ + vanokosheswa sezvo indasitiri yekushanya kwakawanda yatanga kupora," akadaro John Tanzella, Mutungamiri / CEO weInternational Gay & Lesbian Travel Association. "Tinofara kuona kuti Harris Poll inoisa vafambi veLGBTQ + kumberi uye kuti izvi zvakawanikwa pakati penharaunda yeUSBT zvinowirirana neongororo yedu ichangoburwa yeLGBTQ + yekufamba nzendo kutenderera pasirese."